IYunivesithi yaseMiami GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data Admission
IYunivesithi yaseMiami GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi yaseMiami GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO oQinisekisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
IYunivesithi yaseMiami iyunivesithi eyimfihlo yonyunivesithi, kwaye ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abafaki zicelo banqatshwa minyaka yonke. Abafundi bavumile ukuba banamabanga kwaye amanqaku okuhlola aqhelekileyo aphezulu ngaphezu komyinge. Uyabona indlela ulinganisa ngayo ngokusebenzisa le sixhobo esihlawulelwayo esivela eKappex ukuba ubale amathuba akho wokungena.
Ingxoxo yeMigangatho ye-Admissions yeYunivesithi yaseMiami
IYunivesithi yaseMiami yenye yezona zikolo ezikhethileyo eFlorida. Ukuze ungene, mhlawumbi uya kufuna iimpawu kunye neemvavanyo zokuvavanya eziphezulu ngaphezu komyinge. Kwigrafu ngasentla, amanqaku ahlaza okwesibhakabhaka noluhlaza amela abafundi abamkelekileyo. Uyabona ukuba abafaki-zicelo abaninzi abaphumeleleyo banomyinge kwi-"A", uhla lwe-SAT malunga ne-1150 okanye ngaphezulu, kunye ne-ACT amanqaku angama-24 okanye ngaphezulu. Nangona abafundi abathile bengena kwi-"B" kunye ne "B +", amanqanaba aphakamileyo kunye namanqaku okuvavanya kakhulu kukuphucula amathuba akho okuvunyelwa.
Qaphela ukuba kunamaqhezu ambalwa kunye obomvu kunye namacwecwe amacwecwe (abachasiweyo nabafundi abalindileyo) abafihliweyo emva kohlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka kuzo zonke ngaphandle kwekona eliphezulu eliphezulu legrafu. Abafundi abaninzi abanamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya ezijoliswe kwiYunivesithi yaseMiami abazange bangene. Qaphela kwakhona ukuba abafundi abambalwa bamkelwe ngamanqaku okuvavanya kunye namanqaku angaphantsi kwesiqhelo. Oku kungenxa yokuba iYunivesithi yaseMiami, njengamanyunivesithi ahlukeneyo ekhethiweyo yelizwe, iyakwamkelwa ngokupheleleyo kunye isebenzise isicelo esiqhelekileyo . Abantu abamkelweyo banomdla kuninzi kwedatha. Izifundo eziphakamileyo zezikolo eziphakamileyo , ukubandakanyeka okuqinileyo kwee-curricularity , iincwadi ezivuthayo zinconywa , kunye nesincoko yesicelo esiphumeleyo yiyo yonke into ebalulekileyo yokulingana kwe-Miami ye-admission equation.
Unokufunda okungakumbi ngeYunivesithi yaseMiami kubandakanywa izinga lokumkela, izinga lokuphumelela, kunye neendleko kule phrofayili ye-University of Miami .
Amanqaku afana neYunivesithi yaseMiami
Ngeenkampu zayo ezikhangayo, iinkqubo eziqinileyo zemfundo, kunye nokwamkelwa okukhethiweyo, akufanele kufike ngokumangalisa ukuba iYunivesithi yaseMiami yenza uludwe lwam lweekholeji ze-Florida nakwiiyunivesithi kunye nolwahlu lwam phezulu kwiikholeji nakwiiYunivesithi eziphezulu . Iyunivesithi yanikezelwa isahluko se- Phi Beta Kappa ngenxa yamandla ayo kwi-arts bobugcisa kunye nezesayensi. Kwi-front yezemidlalo, iYunivesithi yaseMiami ikhuphisana kwiNgqungquthela yase- Atlantic Coast (ACC) .
INyuvesi yaseMiami yokuLawulwa kunye noLwazi lokuLinda
INyuvesi yaseMiami yokuLawulwa kunye noLwazi lokuLinda. Iinkcukacha ngokukhawuleza zeCapepex
Iindaba ezilungileyo xa kuziwa kwamkelwa kwiYunivesithi yaseMiami kukuba abafundi abane-"A" nemilinganiselo ye-SAT ye-SAT malunga ne-1400 okanye ngaphezulu bavumelekile ukuba bangeniswe.
Oku kwathiwa, xa sihlula idatha yolwazi oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nolwazi oluhlaza okwesibhakabhaka ukusuka kwigrafu, sibona ukuba bekukho inani elibalulekileyo labafundi abomvu (abafundi abatshitshisiweyo) kunye nabasetyhini (abafundi abadibeneyo) bafihliweyo emva kwedatha efunyenweyo yabafundi. Uninzi lwabafundi abanebanga kwi-"A" kwaye uvavanyo lwe-SAT malunga ne-1200 lugqitywe nangona le migangatho yamanani ngokuqinisekileyo ijoliswe ekuvunyelwene kwiYunivesithi yaseMiami.
Legrafu ibonisa ukubaluleka kweziqwenga ezingezizo ze sicelo sakho. Kutheni umfundi omnye angamkelwa kwaye omnye unqatshelwe xa ene-GPA efanayo kunye neemvavanyo zokuvavanya? Iileta zeTepid zinconywa, ukungabikho kobunzulu obuncitshisiweyo, isicatshulwa esincinci, okanye ukuhluleka ukuthatha izifundo eziphakamileyo kwizikolo eziphakamileyo kunokukhokelela ekuchasweni komfaki-sicelo ofanelekileyo.
IYunivesithi yaseTampa GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Heart Heart Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi ye-Quinnipiac GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yase-Arkansas iGPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Illinois Wesleyan Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-West Chester Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Imizekeliso yoLuntu oluqhelekileyo lwaseMerika United States Imithi - uCharles Sprague uSargent
Gqibelela Isikhokelo kwiifoto ze-Abu Ghraib kunye neNtshutshiso yokuThathulwa
Izithuthi zeDodge zeMidlalo, iiCUV kunye ne-Minivans
UAndy Kaufman noJerry Lawler
Guqula Ukushisa NgeSkripthi se-PHP